Global Voices teny Malagasy » Nizeria2011: Taonan’ireo Fandresena Bitika Sy Ireo Sedra Goavana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2012 8:26 GMT 1	 · Mpanoratra Eremipagamo Amabebe Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Ady & Fifandirana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Fifidianana tao Nizeria 2011  ity lahatsoratra ity.
Voarakitra anatin'ny tantaran'i Nizeria ny taona 2011 amin'ny maha-taonan'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fahatelon'io fanjakana io  izany taona izany taorian'ny nahazoany ny fahaleovantena. Ho an'ny tapany voalohan'ny taona, hipoky ny resadresaka momba ny fifidianana ny tontolon'ny bilaogy: hetsi-panoherana, fampielezan-kevitra, fifanakalozan-kevitra , ny anjara toeran'ny teknolojia , fanomanana ireo fandatsaham-bato, ary ny andron'ny fifidianana .
Manana fomba nentin-drazana i Nizeria amin'ny fanodinana ny fitondrana eo amin'ireo mpirotsaka avy ao amin'ny Silamo maro an'isa any Avaratra sy ny Kristiana maro an'isa any Atsimo. Nikorontana izany fandaminana izany  rehefa maty nandritra ny fe-potoana niasàny ny Filoha teo aloha Umaru Yar'Adua tamin'ny 2010, nametraka ny fitondrana teo ambany fahefan'ny lefiny, ilay teratany avy any Atsimo Goodluck Jonathan.
Noharabain'ny maro ho “malalaka sy tsy mitanila” io fifidianana io na dia teo aza ireo tsy fetezana sy ny hosoka kely sasantsasany. Nankalaza ity fahombiazana tsy nanam-paharoa ity ireo Nizeriana manerana ny firenena sy ireo zanaka am-pielezana. Mamintina  izany fihetseham-po ankapobeny izany i Kunle Durojaiye:
Na izany aza, niseho ho fandresena kely manoloana ny herisetra izay nanaraka an'io ny fahombiazan'ilay fifidianana. Nanampy ny raharaha efa mavesatra any Nizeria Avaratra ireo ady misy eo amin'ny Avaratra sy Atsimo, izay nitombo be ny fanafihana maherisetra sy ny fanapoahana baomba hatramin'ny nifandonan'ireo mpitandro filaminana sy ny antokom-pinoana Islamista Boko Haram  tamin'ny 2009.
Tsy ela taorian'ny fandresen'i Jonathan, nipoaka indray ny herisetra tany Avaratra, miaraka amin'ireo fipoahana mitohitohy tany Abuja sy any an-koatra  nataon'ny Boko Haram. Nitombo niaraka tamin'ny taona ny herisetra , namela maty an-jatony sy nanery an'arivony handao ny fonenany.
Manoritsoritra ny zava-misy i @jongambrellAP :
@jongambrellAP : Mbola mijanona ho mafana foana ny toe-javatra any amin'ny fanjakana ambanivohitr'i Kaduna satria mandositra miaraka amin'ny fananany ireo mponina an-tanan-dehibe eny amin'ny manodidina. #nigeriadecides
Anatina lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe, Nigeria: Adrift, Awaiting the Arrival of a Woman, nanangona ireo fihetseham-po  tamin'ny fahalanian'i Okonjo-Iweala i Nwachukwu Egbunike, anisan'izany ity iray ity avy amin'i Nmachi Jidenma :
Anatina lahatsoratra iray hafa, nanondro ny  Sahara Reporters , antsoina hoe “Wikileaks-n'i Nizeria”, ho ivon'ny fahalalahana miteny anatinà tontolo mikorontana ho an'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety i Egbunike .
Nanangona fandalinana tahaka itony ny Tetikasa 419 Positive  ary nisedra ny olona mba hiteny zavatra tsara momba an'i Nizeria amin'ny fanantenana ny hanovàna ny endrika ratsin'ny firenena.
Nanoratra tao amin'io tetikasa io i @gbengasesan :
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Fifidianana any Nizeria 2011  ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/23/27463/
 Fifidianana tao Nizeria 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/nigeria-elections-2011/
 ny anjara toeran'ny teknolojia: https://globalvoicesonline.org/2011/04/07/nigeria-will-technology-impact-2011-elections/
 ary ny andron'ny fifidianana: https://globalvoicesonline.org/2011/04/17/nigeria-votes-2011-opinions-from-the-polls/
 Nikorontana izany fandaminana izany: https://globalvoicesonline.org/2010/02/12/nigeria-after-two-leaderless-months-a-new-acting-president/
 tany Abuja sy any an-koatra: https://globalvoicesonline.org/2011/06/19/nigeria-on-an-explosive-projectile/
 nanangona ireo fihetseham-po: https://globalvoicesonline.org/2011/08/13/nigeria-adrift-awaiting-the-arrival-of-a-woman/
 nanondro ny: https://globalvoicesonline.org/2011/05/12/nigeria-saharareporters-africas-wikileaks/
 Tetikasa 419 Positive: http://www.419positive.org/419-reasons-to-like-nigeria-complete-list/